Posted by Mg JC | 23/06/2010, 15:43
I can’t find it immediately. But I’ll post it once I found it.
Posted by zizawa | 23/06/2010, 15:57
I don’t know if မောင်တို့ချယ်ရီမြေ is copy song or not. But, apparently, Myanmar National Song isapartil copy.
Posted by Sandy | 23/06/2010, 19:44
Starts from aroun 2.48…
Posted by zizawa | 23/06/2010, 20:29
“အမြင်ကျဉ်းတယ်ပြောပြော ကျွန်တော်ကတော့ ဘယ်သူရေးမှန်း မသိတဲ့ ‘မောင်တို့ချယ်ရီမြေ’ ဆိုကော်ပီကြီးမို့ နားကိုမထောင်ချင်ဘူး။”
ငယ်ငယ်တုန်းက အဲဒီကာတွန်းကြည့်တုန်း ဒီသီချင်းကို ကြားတော့ သတိရလို့ ကျွန်တော့်အမေကို “မေမေ… မေမေ… Tom & Jerry ထဲမှာ မောင်တို့ချယ်ရီမြေ ပါတယ်” ဆိုပြီး ပြောတော့ အမေက “ဟယ် ပေါက်တတ်ကရ” ဆိုပြီးတောင် အပြောခံရသေးတယ်။ 😀
Posted by ပိုင် (Pi) | 23/06/2010, 21:00
Posted by zizawa | 23/06/2010, 21:18
ရွှေမိုးညို မေရှင် စန်းသော်တာရေး ၁၉၄၀ အောက်တိုဘာ အေဝမ်းဓာတ်ပြား
Posted by Bo Bo | 23/06/2010, 21:50
ဟာ… ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဗျာ။ ကောင်းလေစွ၊ ကောင်းလေစွ။ နာမည်သိတော့ ရှာရတာ လွယ်သွားတယ်။ ဟောဒီမှာ
Posted by ပိုင် (Pi) | 23/06/2010, 22:16
Posted by မန်းကိုကို | 24/06/2010, 02:08
Thanks once again, Bo Bo. Very impressive!! Ten out of ten…
Posted by watote | 23/06/2010, 22:28
Thanks for the link. In my opinon,asmall portion of “Mg Doet Cherry Myay” and is similar toasmall portion of “Overture from Die Fiedermaus (The Bat)”. Of course, both are waltzes. But, obviously, the former is not an outright copy of the latter.
Posted by Mg JC | 24/06/2010, 00:30
It’s true. I should have said it’sapligiarised song.
Posted by zizawa | 24/06/2010, 01:17
တိမ်လွှာမို့မို့လွင်လည်း မြို့မငြိမ်းရေးတာပေမယ့် ကော်ပီပဲလို့ ပြောတယ်။ မြို့မငြိမ်း ပြောတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ Youtube မှာ ဂျပန်တစ်ယောက်က လာပြောထားတာ တွေ့တယ်။ အဲဒါ ရှေးခေတ် ဂျပန်သီချင်းတဲ့။ 😀
Posted by zt | 24/06/2010, 00:39
Posted by KNSL | 24/06/2010, 00:57
Ravel’s Bolero (http://www.youtube.com/watch?v=3-4J5j74VPw) is also similar to one of old Myanmar songs (see around 1:42). Pls let me know the name of the Myanmar song if you know it.
Posted by Mg JC | 24/06/2010, 01:57
အင်း “Mg JC” ပြောမှ ကြားဖူးသလိုလို ဖြစ်လာပြီ။ စာသားမပါတော့ လောလောဆယ်တော့ သဲလွန်စ မရှိပါ။ I have no clue.
Posted by ပိုင် (Pi) | 24/06/2010, 22:45
It is not only us (Myanmar) my friends. Pls see the following link:
Theft isasort of universal human nature. 🙂
Posted by Mg JC | 24/06/2010, 02:19
Wow, it’sanice clip indeed. Among all those pairs of songs that the clip’s owner claims to be similar, onlyacouple of them are bad enough (similar enough) in my ears to go to courts. Of course, my standard here of being “similar enough” is somewhat arbitrary. (I’m roughly taking Coldplay’s Viva La Vida vs. Satriani’s If I Could Fly asathreshold here because that’s the only court case of music plagiarism that has come to my mind now.) With this arbitrary standard, both of Maung Doe Cherry Myae and Shwe Moe Nyo are similar enough to those two classical pieces to go to courts (i.e., if these incidences happened in countries where people do go to courts for such things.)
The only “bad” thing about giving credits to originals like I wrote above is that when Burma has finally becomeaplace where copyrights is practically protected by laws, these credits may serve as confessions and invite lawsuits from original owners. I’d say, just addaphrase in those laws so that they aren’t applicable retrospectively. 😉
All right, it’s already too long. Thanks for all the links. By the way, please regard this comment asa“bull session” talk. 🙂
Posted by ပိုင် (Pi) | 24/06/2010, 22:35
“If it isn’t financially viable to write/sing so-called copy songs,”
Posted by ပိုင် (Pi) | 24/06/2010, 22:40
Not at all, Pi. Your comments are always well regarded and appreciated..
Posted by zizawa | 25/06/2010, 08:58
တမင် ဖုံးထားချင်လို့ ဆိုတာထက် မြန်မာပြည်မှာ ဒီကိစ္စမျိုး ပြောလေ့ပြောထမရှိလို့ကို ပြောမသွားတာလို့ ထင်နေမိတယ်။ ပြီးတော့ အသိုင်းအဝိုင်းထဲက လူအချင်းချင်းတော့ သိကြမှာလေ။ မြန်မာပြည် အနုပညာလောကမှာ အမှီး၊ အကူး၊ မူပိုင်ခွင့်ကိစ္စက ခုချိန်ထိ ပြီးလွယ်စီးလွယ်ဆန်နေတုန်းပဲ ထင်မိတယ်။ ဟိုးတုန်းကဆို ပိုဆိုးမှာ။
ပြောရင်းနဲ့ ဒီဘက်ခေတ်မှာ “သတ်ပုံမှားတဲ့ ည” အရှုပ်တော်ပုံကိုတောင် သတိရလာသေးတယ်။ ကဗျာရေးသူက တစ်ယောက် (မောင်သီ)၊ သံစဉ်စာသားပြောင်းသူက တစ်ယောက် (မိုးကောင်း)၊ သီချင်းဆိုသူက တစ်ယောက် (ချစ်ကောင်း)၊ အဲဒီသီချင်းနဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို ယူပြီး ဗွီဒီယိုရိုက်သူက တစ်ယောက် (ကျော်သူ)။ အဲဒါ ကျော်သူကို သီချင်းနဲ့ ခေါင်းစဉ်သုံးခွင့် ရောင်းလိုက်တာက သီချင်းရေးသူလား ဆိုသူလား မသိ (ဆိုသူလို့ ထင်တယ်)။ အဲဒီမှာ မူရင်း ကဗျာရှင်က ထဆော်လို့ ပြဿနာတွေ ပတ်ပတ်လည်အောင် တက်ခဲ့တာ၊ မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ ပလူပျံနေရော ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ ဆိုတာ… ခုခေတ် ဘလော့တွေမှာ ဆော်ကြသလိုပဲ 😀
ထူးအိမ်သင် ကော်ပီသီချင်းဆိုတုန်းက ဘာလို့ ကော်ပီဆိုတာလဲ မေးတော့ ဆိုချင်လို့ ဆိုတာပါ ပြန်ဖြေတယ်။
မှန်တာ မှားတာထက် အသားကျနေ၊ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်လို ဖြစ်နေတော့ ဖုံးထားတာတော့လည်း မဟုတ်ဘူး။ ထူးပြီး ပြောနေစရာလို့လည်း မထင်တော့တာများလား မသိဘူး။
Posted by RITA | 24/06/2010, 03:05
“ထူးအိမ်သင် ကော်ပီသီချင်းဆိုတုန်းက ဘာလို့ ကော်ပီဆိုတာလဲ မေးတော့ ဆိုချင်လို့ ဆိုတာပါ ပြန်ဖြေတယ်။ ”
ဟား… ဟား… ကိုငှက်ကြီးကွ။ 😀
စာရေးဆရာမဂျူးကိုလည်း တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း တစ်ခုမှာ မေးတဲ့သူက အများအားဖြင့် ကော်ပီတွေကို ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်တွေထက် (အခုခေတ်ကို ပြောတာ) လူကြိုက် ပိုများကြတယ်၊ ဘာ့ကြောင့်လဲ လို့ မေးတော့၊ ဆရာမဂျူးက “ကော်ပီတွေက ပိုကောင်းတာကိုး” ဆိုတဲ့ အဖြေမျိုး ဆန်ဆန် ဖြေသတဲ့။ ဘယ်နေရာမှာလဲ ဆိုတာတော့ သေချာ မမှတ်မိတော့ဘူး။
Posted by ပိုင် (Pi) | 24/06/2010, 22:48
ethic ဘာညာ၊ မူပိုင်ခွင့် ဘာညာတွေ ဖယ်ထားပြီး စဉ်းစားရင် အဆိုတော်တွေ ပြောလေ့ရှိတဲ့ သူတို့ သီချင်းဆိုတဲ့အခါ ကော်ပီတွေ၊ own tune တွေ မရှိပါဘူး။ သူတို့အတွက်တော့ သီချင်းက သီချင်းပါပဲဆိုတာကို နားလည် လက်ခံလို့ ရပါတယ်။
ကြုံလို့ ပွားပါရစေဦး။ သိပ်မဆိုင်လှပေမဲ့ ဝါသနာပါလို့ပါ။ 😀
မကြာခင်က fwd mail တစ်စောင်ရတယ်။ မြန်မာဘောလုံးသမားတွေကို ရှုံးလာတဲ့အခါမှာ ဂျာနယ်တွေက ပစ်ပစ်နှစ်နှစ် ဝေဖန်တာနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ရေးထားတာပါ။
ဘောလုံးသမားတွေကို သိပ်အပြစ်မတင်ပါနဲ့တဲ့။ ကိုယ်တိုင်ရော နိုင်ငံတကာက ကိုယ်နဲ့ နယ်ပယ်တူလူချင်း ယှဉ်ရမယ်ဆိုရင် ယှဉ်နိုင်ပါ့မလား အရင် ပြန်မေးပါတဲ့။ ဖတ်ပြီး တော်တော် လက်ခံ သဘောကျမိပါတယ်။ အော် မြန်မာ ဘောလုံးသမားတွေမှာ လူချင်းသက်သက် ပြိုင်ရတာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုတဲ့ အတွေး ဝင်လာမိတယ်။
ပြောချင်တာက ခုမှ စမှာ…
Posted by Rita | 25/06/2010, 14:37
well said, daw rita. 🙂
Posted by zizawa | 25/06/2010, 17:26
သီချင်းနဲ့ ပတ်သက်လာရင် တော်တော် ဗဟုသုတ စုံကြတာတွေ့ရလို့ တစ်ကယ့်ကို ချီးကျူးလေးစားပါတယ်။ သီချင်းတွေကို တော်ရုံ လေးစားတန်ဖိုးထားရုံနဲ့ အဲ့ဒီလို ခရေစေ့တွင်းကျ မသိနိုင်ဘူး။ ကျွန်တော်က သီချင်း မဆိုရ မနေနိုင်လောက်အောင် ၀ါသနာပါပေမယ့် သီချင်းတွေရဲ့ ဇစ်မြစ်ကို အဲ့ဒီလောက် မလေ့လာဖြစ်ိဘူး။
သံစဉ်ကောင်းတဲ့ ရော့ခ်သီချင်းတွေ နားထောင်မိရင် ကျေးဇူးပြုပြီး အကြောင်းကြားပေးကြပါ။
Posted by Lun Lunn | 24/06/2010, 04:27
မရီတာ ပြောတာကို သဘောတူပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေက ကော်ပီနဲ့ တော်တော်ကို ကျင့်သားရနေကြပြီ။ ခုနောက်ပိုင်းမှ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်ကို ဦးစားပေးချင်တဲ့ဆန္ဒတွေ ပိုများလာကြတာ။
တစ်ခုပြောပြချင်တာက မြန်မာပြည်မှာ သီချင်းရေးခ၊ တီးဝိုင်းခထက် အဆပေါင်းများစွာ ကုန်ကျတာက တီဗီမှာ ကြော်ငြာခပါပဲ။ ခုလောလောဆယ်တော့ မသိဘူး။ ကျန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၄လောက်ကတောင် စက္ကန့် ၄၀စာကို ၃သိန်းပေးရတယ်။ အဲ့ဒါ တစ်ကြိမ်လွှင့်ခ။ တစ်နေ့တည်း ၃ကြိမ်လွှင့်ရင် ၉သိန်း။ တစ်ချို့ ၁လ၊ ၂လလောက် ဆက်တိုက်လွှင့်တဲ့သူတွေ ဘယ်လောက်ကုန်ကျမလဲ၊ မတွေးရဲဘူး။ သိန်းရာပေါင်းများစွာ ….
ပြီးတော့ ခွေတောင် ဆိုင်ပေါ်ကောင်းကောင်း မရောက်သေးဘူး။ ကူးခွေတွေက နယ်စုံရောက်နေပြီ။ ဒီတော့ ခွေထုတ်သူတွေ ပက်လက်လန်ရောပဲ။
Posted by Lun Lunn | 24/06/2010, 04:46
Posted by Watote | 24/06/2010, 08:09
Posted by မန်းကိုကို | 24/06/2010, 11:47
ပို့စ်ရော မှတ်ချက်နဲ့ပါ ဆိုင်တော့ မဆိုဘူး၊ ဒါပေမယ့် လောဂျစ်ဆရာ ချဲကို တွက်ပြီးထိုးတယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားတယ်။ ချဲကို ထိုးချင်သလို ထိုးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ တွက်ပြီးမှ ထိုးတဲ့လူကို လောဂျစ်ဆရာလို့ ခေါ်နိုင်ပါ့မလား။
Posted by ပိုင် (Pi) | 24/06/2010, 22:44
ကိုပိုင်၊ လောဂျစ်ဆရာဆိုတာက သူ့ရဲ့ဂုဏ်ပုဒ်လေဗျာ၊ ချဲတွက်တာကတော့ သူ့ဝါသနာဆိုတော့ ကဏ္ဍချင်းကွဲတယ်လို့သာ မှတ်ရမယ်ထင်ပါတယ်။ သူ့ထက်ဆိုးတဲ့ သတ္တဗေဒဋ္ဌာနမှူးဆို နာမည်ကြီးဘုန်းတော်ကြီးတွေဆီ စက်ဘီးနဲ့ချောင်းပေါက်အောင်ကို သွားနေခဲ့တာ။
ဒါတွေက လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀ ဝန်းကျင်ကပါ၊ ခုအခြေအနေတော့ သူတို့အတွက် မတွေးရဲဖူး။ ကိုယ့်ထက်ငယ်သူတွေတောင် အရက်ဖေါ ဖေါနေတာတွေ(နှစ်နည်းနည်းပဲခံတော့မှာ) တွေ့ခဲ့ရသေးတယ်ဗျ။ ရှေ့ရေးမရှိကြတဲ့ဘဝမှာ ဘာမှမတတ်နိုင်ပဲ ကိုယ်၊ စိတ်ထွက်ပေါက်ရှာနေကြတာလို့ပဲ နားလည်မိပါတယ်။ ဒီလို ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ ခံစားနေခဲ့ကြရတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေကို ဘယ်လိုများ(စိတ်ဓါတ်တွေ) ပြန်ဆွဲတင်လို့ရမလဲ ဆိုတာကိုတော့ စိတ်ဝင်စားတယ်ဗျ။
Posted by မန်းကိုကို | 25/06/2010, 01:16
ရီတာ ပြောတာအမှန်ပဲ။ ကျွန်တော့်တို့ဆီမှာ အဲဒိ အလေ့အထက မရှိဘူး။ သီချင်းတွေတင်မကဘူး။ စာပေမှာလည်း အလားတူပဲ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပိုင်းလောက်ကကို ဂျာနယ်အယ်ဒီတာ တယောက်ပါပြီး ဟိုးလေးတကျော် ဖြစ်သွားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတခုကို အမှတ်ရမိသေးတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင် မဟုတ်တာကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က သိရင် ဒါကို ရိုးရိုးသားသား ထုတ်ဖော်ပြောတတ်တဲ့ အလေ့အထ၊ ပိုင်ရှင်ကို credit ပေးတဲ့ အလေ့အထ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ လိုကို လိုအပ်နေပြီလို့ ထင်တယ်။
လွန်လွန်းပြောတာတွေလည်း အင်မတန်မှ သဘာဝကျပြီး မျှတတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်။ rock သီချင်းကောင်းတွေပြောလို့ ဟဲဟဲ ကျွန်တော်က Dire Straits ရဲ့ အမာခံ ပရိသတ်ဗျ။ အားလုံးနီးပါးကို ကြိုက်တယ်။ အဲဒိထဲကမှ အကြိုက်ဆုံး သီချင်းတွေကို ရွေးပြရရင်.. ဂစ်တာဆိုလိုမှာ ကျွန်တော်ကတော့ Mark Knopfler ကိုတော်တော်ကြီးမှ တော်တော်ကြီးကို ကြိုက်တယ်။ http://www.youtube.com/watch?v=gbJqduK8sak&feature=related (ဘယ်အကြိမ် နားထောင်နားထောင် မရိုးတဲ့ ဂစ်တာဆိုလို)
Posted by Watote | 24/06/2010, 08:36
ဖတ်ရတာ ဗဟုသုတ အရမ်းရပါတယ်။ ဂီတ နဲ့ အနုပညာ၊ Nationalism တွေကို စိတ်ဝင်စားပေမဲ့ ဖြည့်စွက် ဆွေးနွေးနိုင်လောက်တဲ့ အထိ ၀မ်းစာမပြည့်လို့ပါ။ ပင်တိုင်ဆွေးနွေးတဲ့ ကိုဝတုတ် နဲ့ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Posted by မိုးစက်ပွင့် | 24/06/2010, 10:42
ပို့စ်ကိုရော မှတ်ချက်တွေကိုပါ ဖတ်သွားပါတယ်။ အတော်ဗဟုသုတ ရပါတယ်။ ကျွန်မလည်း စန္ဒရားလှထွဋ်တို့။ စန္ဒရားချစ်ဆွေတို့ ဆိုတဲ့ သီချင်းတွေ အပေါအ၀င် မြန်မာသံစဉ် ခေတ်ဟောင်းသီချင်းတွေကို သိပ်ကြိုက်တယ်။ တိမ်လွှာမို့မို့လွင်ဆိုလည်း ၀င်းဦးဆိုတာကိုမှ နားထောင်ဖြစ်ပြီး ၀င်းဦးအသံကိုပဲ ကြားယောင်နေတယ်။ အခုက ကော်ပီသီချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ တကယ်ကို စိတ်မကောင်းဘူး။
Posted by Nge Naing | 24/06/2010, 12:17
Posted by zizawa | 24/06/2010, 12:41
Ko Wa Tote (Zizawa)
Thx for sharing … I will listen later …
How’s about Steel Heart? He’s not very popular as other. I could find his songs less than 20 only but some of his songs; She’s Gone, Angle Eyes, Ma Ma, Don’t You Cry are my favorite songs …
Posted by Lun Lunn | 24/06/2010, 16:13
Thanks, Lun Lunn. In all honesty, I’ve never heard of him.
Posted by zizawa | 24/06/2010, 20:09
Ko Wa Tote,
If you like it, let me know. I can send sound files. 🙂
Posted by Lun Lunn | 25/06/2010, 07:46
nice one… thanks, lun lunn.
Posted by zizawa | 25/06/2010, 09:02
အဓိကက ကော်ပီသီချင်းဆိုတာထက် ကိုယ့်သီချင်းဟာ ကော်ပီသီချင်း ဒါမှမဟုတ် တခြားသီချင်းတခုခုကနေ မှီးထားတာဆိုတာကို ပြောဖို့ပဲ။ မပြောဘူးဆိုရင် plagiarized လုပ်တယ်လို့ သတ်မှတ်ရမှာဘဲ။ plagiarized သီချင်းတွေကို လူတွေက လက်ခံချင် လက်ခံမှာဘဲ။ ကြိုက်ချင်လည်း ကြိုက်နိုင်တာပဲ။ Dora Than Aye ရဲ့ နံမယ်ကြီး သီချင်းတချို့ဟာလည်း ပြောခဲ့သလို plagiarized သီချင်းတွေပဲ။ တနိုင်ငံလုံးက သီချင်းကောင်းရင်ပြီးရော plagiarized ဖြစ်ဖြစ် outright copy ဖြစ်ဖြစ် ဒါဟာ ရှက်စရာမဟုတ်ဖူး၊ ဂုဏ်ယူစရာ အဖြစ်လက်ခံမှာဘဲ ဆိုရင်လည်း သူတို့ သဘောအတိုင်းပါပဲ။ သူ့ဟာသူ ဆိုချင်လို့ဆိုတာ ဘာမှ အပြစ်ပြောလို့ မရပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင် မဟုတ်တာကို ကိုယ်ပိုင်လိုမျိုး ညာတာပါတေးနဲ့ လူလည်ကျတာကတော့ မရိုးသားဘူး။ ကျွန်တော် သိသလောက် ထူးအိမ်သင်ကို အဲ့သလို မရိုးမသားစိတ်နဲ့ လုပ်တယ်လို့ ပြောနိုင်လောက်တဲ့ အထောက်အထားလည်း မရှိပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဗမာပြည်မှာက မူရင်းပိုင်ရှင်ကို ကိုးကားတာ၊ cite လုပ်တာ၊ acknowledge လုပ်တဲ့ ဓလေ့က ရှိမှ မရှိတာ။ ဒါပေမယ့် ဒါကို ရိုးသားတဲ့ ဓလေ့အဖြစ် ပြောဖို့တော့ ခက်မယ်။ နောက်တခုက ဗမာပြည်မှာ ဘိုစာဖတ်နိုင်တဲ့လူ၊ ဘိုသီချင်းတွေကို နှံ့နှံ့စပ်စပ် သိတဲ့လူနည်းတော့ လူလည်ကျနိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းပိုများတာပေါ့။
တခါက သော်တာဆွေရဲ့ ဝထ္ထုတပုဒ်ဟာ ဘိုဝထ္ထုတပုဒ်ကို ခိုးချထားတာဆိုပြီး ဗမာစာသင်တဲ့ ဘိုမကြီးတယောက်က သူ့ကိုထောက်ပြဖူးတယ်။ ၀ထ္ထုထဲက တချို့dialouge တွေဆိုရင် အတိအကျတောင်တူတယ်။ ဒါပေမယ့် သော်တာဆွေက ဒါသူ့ကိုယ်ပိုင်ပါဆိုပြီး ခံငြင်းတယ်။ အလျှော့ပေးသွားတယ်တော့ မကြားမိဘူး။ မောင်သာနိုးကတော့ သော်တာဆွေရဲ့ ဝထ္ထုကိစ္စကို သူခိုးလက်က သူဝှက်လုတဲ့ အဖြစ်ပမာ ရေးတယ်။ သော်တာဆွေက ၀ထ္ထုရေးနည်းသင်တန်းလားဖွင့်တော့ တပည့်တယောက်က အဲဒိ ဘိုဝထ္ထုကိုကူးချပြီး သော်တာဆွေကို ပြတာဖြစ်နိုင်တယ် ဆိုတယ်။ သော်တာဆွေက ဒါကိုသဘောကျပြီး သူ့ရဲ့ ရင်တွင်းဖြစ် လိုလို လုပ်ပစ်လိုက်ပုံရတယ်။ အဲ့တော့ သော်တာဆွေက မူရင်း ဘိုဝထ္ထုကို မဖတ်ဖူးတာ ဖြစ်နိုင်တာပေါ့။
နောက်ပီး ၀င်းဦးဝထ္ထုတွေ အပါအ၀င် တချိန်က စာဖတ်ပရိသတ်တွေကြားမှာ နံမယ်ကြီးခဲ့တဲ့ စာတွေကိုလည်း သံသယရှိတဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ သေချာပြန်ကြည့်ရင် အရင်က မသိသေးတာတွေ ပေါ်လာနိုင်တာပဲ။ အဲ့သလိုပေါ်လာလို့ ဒီအနုပညာ လက်ရာတွေကို အရင်လို ဆက်ကြိုက်မကြိုက်ဆိုတာကတော့ နောက်တပိုင်းပေါ့။ လူတယောက်ဟာ မှားယွင်းတဲ့ အသိတခုကပေးတဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကနေလည်း တသက်လုံး စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်စွာ နေသွားနိုင်တာပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒါကို စစ်မှန်တဲ့ စိတ်ချမ်းသာ ပျော်ရွှင်မှုလို့ ပြောမလား။ ဒါကနောက်ရေးချင်စရာ ခေါင်းစဉ်တခုပေါ့။
Posted by Watote | 25/06/2010, 10:11
Posted by Rita | 25/06/2010, 14:03
Posted by မန်းကိုကို | 26/06/2010, 15:05
Posted by zizawa | 26/06/2010, 19:01
Posted by ပိုင် (Pi) | 25/06/2010, 21:15
Posted by မန်းကိုကို | 26/06/2010, 14:44
Oh, I thought I was stilla“Lu Nge.” 😀 Oh, well, perhaps I’m not that young anymore… sigh…
Posted by ပိုင် (Pi) | 26/06/2010, 17:43
Thanks for the initiative, Pi… I’m genuinely interested. We’ll talk more, shan’t we?
Posted by zizawa | 26/06/2010, 18:42
I would like to say that most of the Burmese modern music(except classical Burmese music) using Western instruments are copied partially or wholly from western music.
Posted by Tin | 26/06/2010, 03:39
“ဘယ်မူရင်းသီချင်းကို စာသားထည့်ထားပါတယ်။ ဘယ်မူရင်းသံစဉ်တွေကို မှီးပါတယ်လို့ ” သီချင်းခွေကာဗာတွေမှာ ထည့်ပေးလို့ ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချို့ကိစ္စတွေမှာက တိုက်ရိုက်တထေရာတည်း ကူးယူထားတာမဟုတ်ပဲ ဖြတ်ညှပ်ကပ်ဖြစ်စေ, နားထဲမှာ စွဲနေတဲ့ သံစဉ်အပိုင်းအစတွေ, တီးဟန်တွေ ပေါင်းပြီး ထွက်လာတဲ့ သံစဉ်အသစ်တွေလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကော်ပီပဲဖြစ်ဖြစ်, ဖြတ်ညှပ်ကပ်ပဲဖြစ်ဖြစ် (အနုပညာ) ဖန်တီးမှုကတော့ ပါတာပါပဲ။ ဂုဏ်ငယ်စရာ မရှိဘူး ထင်ပါတယ်။ ရှေးခေတ်မြန်မာတွေလည်း ဒီလိုပဲ ဖြတ်ညှပ်ကပ် ခေါ်ခေါ် စု-တု-ပြု ခေါ်ခေါ်လုပ်ခဲ့ကြတာပါပဲ။ ( ဥပမာ ပျို့ကဗျာအများစုဟာ ၅၅၀-ဇာတ်တော်တွေကို မှီးထားတာပါပဲ) အကိုးအကားထုတ်ပြတဲ့ အလေ့အထသာ နည်းခဲ့တာပါ။ ဒါကလည်း အများသိပြီးသားလို့ ယူဆကောင်း ယူဆခဲ့ကြလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
Posted by ဧရာ | 26/06/2010, 15:24
‘ကော်ပီပဲဖြစ်ဖြစ်, ဖြတ်ညှပ်ကပ်ပဲဖြစ်ဖြစ် (အနုပညာ) ဖန်တီးမှုကတော့ ပါတာပါပဲ။ …. ရှေးခေတ်မြန်မာတွေလည်း ဒီလိုပဲ ဖြတ်ညှပ်ကပ် ခေါ်ခေါ် စု-တု-ပြု ခေါ်ခေါ်လုပ်ခဲ့ကြတာပါပဲ။’
Posted by zizawa | 26/06/2010, 19:25
“ကော်ပီပဲဖြစ်ဖြစ်, ဖြတ်ညှပ်ကပ်ပဲဖြစ်ဖြစ် (အနုပညာ) ဖန်တီးမှုကတော့ ပါတာပါပဲ။”
Posted by ပိုင် (Pi) | 26/06/2010, 19:38
“တိုက်ရိုက်တထေရာတည်း ကူးယူထားတာမဟုတ်ပဲ ဖြတ်ညှပ်ကပ်ဖြစ်စေ, နားထဲမှာ စွဲနေတဲ့ သံစဉ်အပိုင်းအစတွေ, တီးဟန်တွေ ပေါင်းပြီး ထွက်လာတဲ့ သံစဉ်အသစ်တွေလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ”
Posted by Winsg | 01/07/2010, 08:54